Ntuziaka ahịa - Yunis International Trading Co., Ltd.
Inter mba ahia obodo di iche 1
Lọ ọrụ mmepụta: Ihe egwuregwu nkịtị, ihe ụmụaka nwere ike ịdakwasị, Ihe egwuregwu ụmụaka, ihe egwuregwu eletriki, ọla, ihe ịchọ mma, ngwa mma, ifuru, ihe ịchọ mma, ememme, njem nlegharị anya, ifuru, osisi seramiiki, ogwe osisi.
Mpaghara Otu ejikọtara na District A, District B, District C, District D na District E, ma nwee ala anọ. Mpaghara a bu ahia ifuru ahihia nke Yiwu na ahia ihe eji eme ya, ahia ahia nke Yiwu umuaka, ahia ahia nke Yiwu ya na ahia, Yiwu ntutu ndi ozo, ahia nke Yiwu Arts & Crafts, ahia ahia Nyawu, ahia ahia Yiwu Porcelain & Crystal, ahia Yiwu Souvenirs.
Ihe ndị a bụ ọnọdụ ngwaahịa a kapịrị ọnụ:
Ala Uzo mbu: Ifuru wuru di na District A na District B; Ngwa ndị eji eme ifuru bụ na District B.; ihe egwuregwu ụmụaka na - egwuri egwu bụ ihe egwuregwu ụmụaka nọ na C.; Nkịtị egwuregwu bụ na District D na District E.
Uzo nke abuo: Ihe ndi ozo di na ntutu di na A, District B na District C; Ọla dị na District C, District D na District E.
Ulo nke ato: Nkuzi Arts & Crafts di na District A; Artschọ Mma & Ọrụ dị na District A, District B na District D; Porcelain & Crystal dị na District D; Njem Nkà na Nkà dị na Distric D; Okpokoro foto dị na District D na District E; Ngwa mma di na District E.
Ala nke anọ: Ifuru Artificial dị na District A; Ọla dị na District A, District B, District C, District D na District E; Arts & Crafts dị na District B, District C, District D na District E.
Ngalaba Mmeputa: Suitcases & akpa, Umbrellas, Akụrụngwa Auto, Uwe mmiri & PLOY, Akụrụngwa akụrụngwa, Akụrụngwa & kichin & bat, mkpọchi, nnukwu elekere & eserese, ngwa ụlọ, ngwa eletriki, akụrụngwa telefon, ngwaọrụ & igwe.
A na-ejikọ mpaghara Abụọ site na District F na District G ma nwee ala 5. Mpaghara abuo bu nke Yiwu RAIN GEAR, imewu Suitcase & bag, ahia ahia Yiwu Akuko & Ngwa ahia, Yiwu Lock, ahia ebe a na - eleta elekere elekere elekere elekere elekere elekere elekere elekere elekere elekere ebe a na - ere ihe, a na - ere ahịa elekere elekere elekere & elekere elekere, a na - ere ahịa elekere elekere elekere elekere, a na - elele elektrọnik ahịa nke Yiwu.
Ala Ugbo mbu: Poncho, Coat Rain na Umbrella nọ na Distric F; Suitcase & Akpa dị na District F.
Ulo nke Abụọ: mkpọchi dị na District F; Ngwaọrụ dị na District F; Akụrụngwa dị na District F na District G.
Ala nke ato: Ironware dị na District F; Eletrọnik ụlọ dị na District F; Telekomunikes dị na District G; Elekere & Elekere nọ na District G; Ngwongwo Kọmputa dị na District G.
Ala nke Anọ: Mpaghara ngwaahịa mpaghara dị na District F; Ngwa ahịa Anhui Province dị na District F; Ihe ngosi ngwaahịa Hongkong dị na District F; Osisi ngwaahịa Sichuan Province dị na District F; Ihe ngosi ngwaahịa Korea dị na District F; Akụrụngwa dị na District F ruo District G; Suitcase & Akpa dị na District G; Eletrọniki dị na District G; Elekere & Elekere nọ na District g.
Ala nke ise: Tradelọ Ọrụ Azụmaahịa Ofesi.
Yiwu International Trade City, District 3 bụ mpaghara owuwu ihe dị nari 460,000. Otu ala atọ nwere oghere dị puku isii ma ọ bụ iri na anọ. Ala anọ ruo ise nwere ihe karịrị 600 ebe nwere 80-100 square. Ala nke anọ bụ maka mmepụta nke etiti azụmaahịa.
Ngalaba Mmeputa: Bọt, Zippers, Iko, ịchọ mma, Pensụl & Ink & Akwụkwọ & Akwụkwọ, Ngwá ọrụ & ụlọ, Egwuregwu Sporting, Egwuregwu egwuregwu, Ihe.
Mpaghara Ewu Yiwu Futian Market ato bu nke ahia ahia Yiwu, ahia ahia nke Yiwu, ahia ihe ahia, Yiwu office na ere ahia, ihe ndozi ahu na akpukpo ahihia nke imewu, ahia nke Yiwu nke onwe, ogwe aka nke oyibo, ahia ahia nke Yiwu, ahia ndi ozo nke imewu nke a ndozi e ji achọ mma ahịa.
Ala mbu: ofdị Pen, ụdị ink, ngwaahịa akwụkwọ na iko.
Ala nke abụọ: oflọ ebe a na-edebe ụlọ, ihe ọfịs, egwuregwu na ihe ntụrụndụ.
Ulo nke ato: ihe ịchọ mma & ngwa ịchọ mma, mma & nlekọta onwe, enyo na combs, bọtịnụ & zipa na ngwa mma.
Ala nke anọ: ụlọ mmepụta ihe ịchọ mma na ịma mma onwe ya & nlekọta ya, ụlọ ọrụ egwuregwu na ihe ndị dị n'èzí, ụlọ ọrụ nke ngwa mma.
Ulo nke ise: ihe osise eji achọ mma na ihe eji achọ ihe osise.
Emewu International Trade City District 4 mepere aha ya bụ Ọktọba 21, 2008. Mpaghara ebe a na-ewu ahịa dị nde mita 1.08, ebe ụlọ ahịa karịrị puku iri na isii na-akwụ ụgwọ karịa puku ụlọ azụmahịa dị puku iri na itoolu.
Ngalaba Mmeputa: Ihe ndi choro ubochi nile, Ihe nkpuchi ya na ihe ndi ozo (tinyere Bra, uwe ime, skarves, uwe, okpu na akwa ndi ozo), eriri akwa (tinyere bel), Knitwear (hosiery), Neckties, Towels, Wool, Lace.
Mpaghara Ewu Yiwu Futian Market anọ bu ahịa Yiwu sọks & leggings, ahịa ezinụlọ Yiwu, ahịa Yiwu, ebe a na-ere ahịa Yiwu, ebe a na-ere ahịa Yiwu, ebe a na-ere ahịa Yiwu, ahịa a na-ere ahịa Yiwu, ahịa a na-ere n'ahịa Yiwu Egwuregwu osisi Yiwu na epeepe epeepe na etiti Nyawu.
Ulo nke mbu: ụdị sọks na leggings niile.
Ulo nke Abụọ: kindsdị ihe dị iche iche dị n’ụlọ, nke a kpara akpa na akwa, okpu, uwe aka, akpa ntị.
Ulo nke ato: udiri ucha nile, ikpa, akwa ukwu. Ulo nke Anọ: tsdị belt niile na ngwa, ihe mkpuchi, ịchafụ na leggings.
Ala nke ise: n'etiti imewu akwa, akwa, akpụkpọ ụkwụ, ụlọ (seramiiki si Chaozhou), ngwa & ihe ekike na ihe osise.
Mpaghara 5 kpuchie mpaghara acres 266,2,2, ebe a na-ewu ihe dị 640,000 square mita, ntinye ego zuru ụwa ọnụ nke ijeri $ 1.42 (ihe dị ka nde 221,5 USD), ala ise, ala abụọ n'okpuru ala, yana ihe karịrị 7,000 azụmahịa dị.
District 5 a ka etinyere ọhụrụ bụ maka ngwaahịa, ihe ndina na ákwà mgbochi, akwa, ngwa akpa na moto.
Mpaghara ise nke Yiwu Futian Market bu nke gụnyere nri nri, ahịa ngwaahịa nlekọta ahụ ike, ahịa akwa, shigo ahịa, ahịa ebe a na-ere akwụkwọ nri, ahịa akwa, ahịa wig, ahịa mkpuchi, ahịa wiwi a na-ere, ahịa ụgbọala. , anụ ụlọ ahịa.
Ulo nke Ugbo: Ihe nri eji esi nri, ihe nlekọta ahuike, akwa nbata, ihe osise na nka, ulo ihe nlere Africa na ihe ndi ozo abatara.
Ala nke abụọ: ụdị ihe eji ehi ura, ihe ndi ozo eji eme ha. Ala nke ato: sdị mkpuchi niile dị iche iche, akụrụngwa ejiri rụọ na onyinye agbamakwụkwọ.
Ulo nke Anọ: itemsdị ihe eji eme ugbo ala, akụkụ mọzụlụ na enyemaka.